क्रमभंग पछि रोएका आत्महरु – Nepalpostkhabar
Hemant KC । ८ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:१६ मा प्रकाशित
मूल मुटु अर्थात जिल्लाकै मुख्य भाग भेरी नगरपालिका ? विकासको हिसावले अग्रणी भाग मात्र होइन्, दुनियाँको दृष्टि पर्ने भाग समेत यही हो । तपाइलाइ लाग्दो हो यहाँ केही भएको छैन , सवै संरचना उनै छन् । हेर्ने नजर सवैका समान नहुँदा भएका कामको पनि खास जस लिन नसक्ने अवस्थामा यही नगरपालिका हाँस्दा ,हाँस्दै रोएको छ ।
एक थरीले लगातार लगाएको आरोप चाँही के हो भने नगरपालिकाले विकासको नाममा देखिने आफ्नै सिंहदरवार बनायो , अर्को थरीले भन्दै छन् होइन त्यो बनाउदा पनि ठुलै धनराशी चलखेल भयो । हेर्नुहोस , सडकमा बोलिने अचम्मका भाकाको तालमा मादल बज्ने भए यो संसारमा उहिल्यै प्रर्लय आइसक्थ्यो ? केही दिन अघि काफलचौर पुग्ने अवसर मिल्यो । काफलचौर वहुँप्राविधिक शिक्षालयको खास हर्व भएको ठाउँ हो ।
केही समय अघि दशथरी कथाले यहाँको नाम चर्चामा त ल्यायो नै , राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदलिएको छ । भेरी नगरपालिकाले शिक्षालयको समाचार आउन वितिकै तुरुन्तै भवन निर्माणको लागि पहल थाल्यो र त्यो निकट केही दिनमै विद्यार्थीहरु बस्न पाउने भएका छन् । खेलमैदानका लागि नगरकै डोजर लिएर निर्माणमा तिव्रता दिएको छ । खानेपानीको पहुँच पुर्याउनका लागि सवै कार्यालयको सहकार्यमा वृहत योजना बनाएर अगाडी बढ्ने खानेपानी कार्यालयको सोच रहेको छ ।
तत्कालिन वनमन्त्री तथा जाजरकोटका एक मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको चुनावी एजेण्डा समेत रहेको वहुँप्राविधिक शिक्षालय कर्णालीकै एक शसक्त कार्य हो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा आउने समस्यासँग नगरपालिका परिचित हुँदै शिक्षकको तलव समेत उपलव्ध गराउदै आएको छ ।
नगरपालिकाले आफ्नो दायित्व बोध गरि सो कार्यलाई आफै व्यवस्थापन गदै आएको छ । त्यस्तै भेरी नपा १ मा जडीवुटी प्रशोधन गर्नका लागि काम अगाडी बढेको छ । संघीय सरकार ( वन मन्त्री बस्नेत) को अग्रसरता र नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीको सहकार्यमा यो कार्य भएको छ । यो बाटो सवैले लाभ लिन सक्ने छन् । सवै वडाहरुमा सडकहरु पुग्ने क्रम जारी रहेको छ । कच्ची कटानका कामहरु निरन्तर भइरहेका छन् ।
मुटु रुपमा रहेको भेरी नगरपालिका आफैमा एक उत्कृष्ट खेलाडी मात्र नभएर वौद्धिक व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पालिका पनि हो । जिल्लाकै नयाँ परिचय मात्र नभएर इतिहाससँग जोडिएको मालिका पदमार्ग देखि भ्यूटावर निर्माणका लागि भर्खर बजेटको व्यवस्थापन भइसकेको छ । डिपिआर निर्माण भएको एक वर्ष पछि वजेट पाएको मालिकाले अव खास परिचय फेर्ने सूचनाले पक्कै पनि खुसी भएको हुँनुपर्छ । अव यसले मुहार फेर्न पर्छ र आफ्नो परिचय बदल्न पर्छ । आवश्यक नीति नियमको अभावमा माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्थामा गुर्जीएको भेरी नगरपालिका अव नीति र विधिमा केही बलियो भएको छ । जिल्लाका सवै भन्दा बढी सरकारी कार्यालय , सवैका आँखा लाग्ने ठाउँ समेत रहेको भेरी नगरपालिका सवैको उदाहरण बन्नुपर्ने चुनौती आफैमा रहेको छ ।
प्रदेशको मताहातमा रहेको अस्पतालको समस्या परे नगरपालिका, क्याम्पसको समस्या परे नगरपालिका , अन्य साना देखि ठुला समस्य परे नगरपालिका यसलाई नजिकैको सरकार प्रति जनताले देखिएको मायाको रुपमा लिनुपर्दछ । केही ठाउँमा भने भएभरको रकम सदरमुकामलाइ मा छर्न पर्छ भन्ने एकाध व्यक्तीको वादशाहपुर्ण तर्कले काम नगर्दा सरकार र त्यस्ता व्यक्तिको बीचमा द्धन्द्ध हुँने गरेको छ । सदरमुकामको विडम्वना के छ भने एकै ठाउँमा पहिरो दश पटक सम्म जाने गरेको छ ।
वर्षेनी सोही ठाउँमा विकास बजेट चौपट हँुदै गएको छ । जाँनी ,जाँनी सडकमा पानी हाल्छन् अनि सडक भत्काउछन् उनै व्यक्तिले फेरी सडक भत्कियो भन्दै योजना माग्न नगरपालिका ,अन्य कार्यालयमा पुग्छन् । सरकारको सत्तोसराप गर्दछन् । यो भन्दा पहिला कहिले पनि नभएको काम , गाउँ ,गाउँमा गर्भवती खोज्दै स्वास्थ्यकर्मी भिडियो एक्सरे सहित भेरी नगरपालिकाले नै पठाएर बालमृत्यु दर र मृत्युदर घटाउने काम सुरुवात गरिएको छ । दुखद कुरा त के छ भने विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्झन बढी छ ।
मिडिया क्षेत्रमा हुँने विज्ञापन तथा अन्य कार्यमा केही व्यक्तिको अर्थहिन हालीमुहालीले नगरपालिका मिडिया मैत्री होइनकी भन्ने लागेको आरोप चिर्न जरुरी रहेको छ । कमिसनतन्त्रको लोभलाइ निमुलपारी खास विभदरहित अस्त्र प्रयोगमा ल्याएमा भेरी नगरपालिकाको संमृद्धी खास टाढा छैन ।